Burcad - BBC Somali - Mawduuc
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 8 June, 2014, 11:54 GMT 14:54 SGA
Burcad daysay shaqaale markab
Burcadda Soomaalida ayaa sii daysay shaqaale markab ooo ay haysteen in kabadan saddex sanno
Sawirro maalinta 18-ka May
18 Mey 2014
Xabsi Burcad badeed laga furay Puntland Maqal05:25
Xabsi casri ah oo loogu talagalay maxaabiista burcad badeeda la xukumay ayaa maanta laga furay magaaldaa Garowe ee Puntland.
Waraysi Wasiirka Ganacsiga ee SomalilandMaqal04:02
Wafdi uu hoggaamiyo wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ee Somaliland Maxamed Cabdullahi Cumar, ayaa safar shaqo ku jooga magaaladda Lodon ee waddanka Britain.
Baydhabo oo laga taagay calan maamul cusubMaqal06:12
Magaalada Baydhabo waxaa maanta laga taagay calanka cusub ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madoobe Nuunoow Maxamed oo ka mid ah guddiga wada shirka ayaa BBC uga warramay maamulka ay sameynayaan.
27 Janaayo 2014
Dowladda Belgium oo xirtay Afweyne
Masuuliyiinta Belgium ayaa xiray, Maxamed Cabdi Xasan, oo loo yaqaan Afweyne, oo loo heysto burcad badeednimo. Waxaa la qabtay Afweyne markii uu ka soo degay garoonka dayaaradaha ee magaalada Brussels. 14 Oktoobar 2013
Burcad soo daysay Markab
Burcadda Soomaalida ayaa sii daysay markab kadiib markii ay heleen lacag madaxfurasho.
9 Maarso 2013
Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee dalka Mareykanka, John Kerry, ayaa markii ugu horreysay balanqaaday taageero toos ah oo Mareykanku siinayo mucaaradka hubeysan ee Suuriya.
28 Febraayo 2013
4 Febraayo 2013